၂၀၁၃ ခုနှစ်တရားစခန်း သတင်းနှင့် အလှူရှင်စာရင်း
စတုထ္ထအကြိမ် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဝိပဿနာတရားစခန်း
နေ ့ရက် ။ ။ ၀၆-၀၇-၂၀၁၃ (စနေနေ့) မှ ၁၄-၀၇-၂၀၁၃ (တနင်္ဂနွေ) အထိ
(Monday to Friday အလုပ်လုပ်သူများ ခွင့် (၅)ရက်သာ လိုပါသည်။)
လျှောက်လွှာပိတ်ရက် ။ ။ ၂၆-၀၆-၂၀၁၃
တရားစခန်း အစမှအဆုံး အထိ (၉) ရက်လုံးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
ဒုလ္လဘရဟန်းဝတ်သူ၊ သီလရှင်ဝတ်သူများ တရက်စော၍ တရားစခန်းသို့ ဝင်ရန်လိုပါသည်။
Online registration တင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိသူများ ကိုချမ်းမင်း (၉၆၉၁၉၇၅၄)၊ မဇင်ဇင်ခိုင် (၈၃၄၈၃၅၃၃) နှင့် မအိအိအောင်(၈၁၁၃၈၇၈၉) သို ့ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
ဆရာတော်များ၊ ယောဂီနေထိုင်ရန် တရားအားထုတ်ရန်ခန်းမအလှူတရက် S$ ၆၀၀
ဇော်မိုးစံ (၉၁၇၁၄၃၅၀)၊ မကျော့ကျော့ခိုင်၊ ကိုကျော်လွင် (Dhammadownload - ၉၇၃၆၅၀၃၄)၊ ကိုမျိုးဝင်းရီ (၉၂၃၁၆၆၆၄)၊ ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး (၉၁၁၉၇၃၆၁)၊ ကိုတိုးကြွယ်အောင်(၉၈၄၆၈၂၅၄)
တရားစခန်းအတွက်အထွေထွေအလှူရှင်များ (General Sponsors List)
၁ ကိုချမ်းမင်း + မမိမိအောင် သား မောင်ရှင်းသန့်ညီ မိသားစု
အထွေထွေ S$ ၅၀၀
၂ ကိုဇင်အောင် အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၃ မအိအိအောင် အထွေထွေ S$ ၂၀
၄ ကိုဖုန်းဇော်လင်း+ မအေးအေးမာ သား ရဲရင့်လင်း မိသားစု အထွေထွေ S$ ၆၀
၅ အဖွားဒေါ်ကျင်ရွှေ၊ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့်အား ရည်စူး၍ ကိုအောင်ကိုမြင့်+ မထက်ထက်နိုင်
အထွေထွေ S$ ၅၀၀ *
၆ ကိုအေးမင်း@Dahe Liu + မနုယဉ်ထွေး
အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၇ ဦးလှအေး+ ဒေါ်ပုလုံး(ခ) ဒေါ်တင်အေး သား ကိုလင်းထွန်းအောင်
၈ မသဇင်ထိုက်၊ မအိအိထွေး
၉ မနှင်းဆွေလှိုင်၊ မခိုင်စုလွင်၊ မချောစုလှိုင်၊ မဖြိုးနန္ဒာအေး
အထွေထွေ S$ ၃၀၀
၁၀ ကိုမြင့်ဇော်+ မစိုးပပမွန် မိသားစု
၁၁	 ဦးဝေလင်း+ ဒေါ်သန်းညွန့် သမီး မထိုက်ဝေလင်း
အထွေထွေ S$ ၁၅၀
အထွေထွေ ှS$ ၂၀
၁၄ Nippon Express Company ဝန်ထမ်းများ၊ မမေမီဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ
အထွေထွေ ှS$ ၅၀
၁၅ ကိုထွန်းမြင့်ခိုင်+ မဇင်ကြည်ဦး သမီးကြည်စင်လင်းထွန်း၊ အိလဲ့ရည်ထွန်း မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၁၆ ကိုမျိုးမင်းသိန်း+ မခင်စုစုအောင် သမီး ခင်မိုးသိန်း အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၁၇ ဦးခင်မောင်ထွန်း+ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း သား ကိုမျိုးမင်းထွန်း+ Lam Mei Foong မိသားစု* အထွေထွေ S$ ၇၀၀ *
၁၈ မနွယ်နွယ်အေး အထွေထွေ S$ ၂၀၀
၁၉ ကိုမင်းထွဋ်အောင်၊ မနှင်းဝေအောင် အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၂၀ ဦးဘဝင်းရွှေ+ ဒေါ်နှင်းရီ သမီး မနန်းလင်းလင်းထွေး အထွေထွေ S$ ၁၅၀*
၂၁ ဦးခင်လှ+ ဒေါ်အေးမိစံ သားကျော်မင်းထွန်း အထွေထွေ S$ ၅၅ *
၂၂ မိဘများအားအမှုးထား၍ ကျော်အောင်လတ်+ အိအိသိန်း (မီးမီး) အထွေထွေ S$ ၁၀၀ *
၂၃ မျိုးလွင်ဦး+စုစုလင်း အထွေထွေ S$ ၁၀၀ *
၂၄ Joseph Ong + Jasmine Phua အထွေထွေ S$ ၁၀၀ *
၂၅ Wang Jung Ming + Lucyana Norman အထွေထွေ S$ ၁၀၀ *
၂၆ ခင်ခင်ဝင်း အထွေထွေ ှS$ ၅၀ *
၂၇ Mr Lim Teck Yam + Family အထွေထွေ ှS$ ၃၀ *
၂၈ ဦးပိုင်စိုး+ ဒေါ်ခင်မြသန်း သမီး ဆွေဆွေသက်ပိုင်၊ သက်ဆုပိုင်၊ သားဝေဖြိုးပိုင် မိသားစု* အထွေထွေ S$ ၂၀၀*
၂၉ ဦးတင်ထွန်း+ ဒေါ်သိင်္ဂီခင် မိသားစု အထွေထွေ S$ ၂၀၀
၃၀ ကိုနေမျိုးသူ+ မအိန်သူနိုင် အထွေထွေ S$ ၁၅၀*
၃၁ ဒေါ်မာမာညို အထွေထွေ ှS$ ၅၀
၃၂ ကိုမင်းမင်းထွန်း+ မတင်မျိုးခိုင် မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၅၀*
၃၃ ကိုစိုးမိုး+ မနွယ်နီစော မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀*
၃၄ ဦးပိုင်စိုး+ ဒေါ်ခင်မြသန်း သမီး ဆွေဆွေသက်ပိုင်၊ သက်ဆုပိုင်၊ သားဝေဖြိုးပိုင် မိသားစု အထွေထွေ S$ ၂၀၀*
၃၅ ဦးဖိုးကျား+ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြ မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၃၆ ဦးသိန်းရွှေ+ ဒေါ်စန်းစန်းငွေ မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၃၇ မမိုးမိုးခိုင် အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၃၈ အလှူရှင်တဦး အထွေထွေ S$ ၅၀၀
ကိုစိုင်းကျော်ရွှေ+ မသန်းသန်းထွေး သမီး နန်းမိုးပွင့်ဖြူ၊ နန်းသဒ္ဓါထက်၊ နန်းအေမီကို မိသားစု
အထွေထွေ S$ ၁၁၀၀
၄၀ ဦးအုန်းသန်း+ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းရွှေ မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၄၁ ဦးလှမြင့်+ နန်းဝိုးရှဲန်မိသားစု အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၄၂ ကိုအောင်ခိုင်မင်း	 အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၄၃ ကိုမင်းဇော်ထွေး+ မိမိုးကလျာမွှေး သား မောင်အာကာမင်းဇော် မိသားစု အထွေထွေ S$ ၂၀၀
၄၄ မဝေေ၀ဖြိုး	 အထွေထွေ S$ ၂၀*
၄၅ ဒေါ်အေးကွမ်၊ သမီး နန်းရွှေကျင် အထွေထွေ S$ ၆၀၀
၄၆ ကိုသန်းလွင်+ မသဇင် သမီး မေသက်တင်၊ သဇင်ထက် အထွေထွေ S$ ၁၅၀
၄၇ ကိုသန်းထွဋ်နှင့် သူငယ်ချင်းများ အထွေထွေ S$ ၇၀
၄၈ မနွယ်နွယ်သိန်း အထွေထွေ S$ ၃၀၀
၄၉ ကိုချစ်ကိုကို+ မဇာချည်ဦး သားဟိန်းထက်ဖြိုး အထွေထွေ S$ ၂၀၀
၅၀ မမွန်ရည်အောင် အထွေထွေ S$ ၂၀၀
၅၁	 စေတနာရှင်တဦး အထွေထွေ S$ ၅၀
၅၂ ကိုဉာဏ်ထွန်း အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၅၃ ကိုအောင်ကိုမြင့် အထွေထွေ S$ ၅၀၀
၅၄ ကိုအောင်ရီ + မတင်တင်နွယ် သမီး စုမြတ်အောင် အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၅၅ မတင်တင်အေး အထွေထွေ S$ ၇၅
၅၆ ကိုအေးမင်းထွန်း အထွေထွေ S$ ၁၀၀
၅၇ ကိုအောင်ကျော်မြင့် + မယဉ်မင်းသွယ် အထွေထွေ S$ ၆၀
၅၈ ဒေါ်ခင်ဖုန်းကြွယ် အထွေထွေ S$ ၅၀**
၅၉ ဦးထွန်းမြင့် အထွေထွေ S$ ၃၀**
၆၀ ဒေါ်တင်တင်ချို အထွေထွေ S$ ၂၀**
၆၁ ဒေါ်သီတာ အထွေထွေ S$ ၂၀**
62 Sanji Engineering Pte Ltd
Mr Sam Ho & Staff For General S$ 480
၆၃ ဘေဘေး၊ ခွန်ခွန်း၊ ခင်ခင်ဝင်း၊ ကိုကျော်အောင်လတ်၊ မီးမီး၊ ကိုမျိုးလွင်ဦး၊ မစုစုလင်း၊ Jasmine Phua၊ ထက်ထက်၊ ကိုကျော်မြင့်နိုင်၊ မကေခိုင်စိုး ကူရှင်အစုံ (၁၀၀)ခု
၆၄ (ဦးလီရှောင်ဖု)+ ဒေါ်ရှီပင်ဖွမ်၊ သမီး အားကျွမ်း အထွေထွေ S$ ၃၀၀
၆၅	 ကိုကျော်ဇွာ+မတင်တင်အေး သမီးသက်နှင်းခင်ခင်	 အထွေထွေ ှS$ ၁၀၀
၆၆ မခိုင်သိံဂီဦး အထွေထွေ S$ ၁၅၀
၆၇ မခင်သက်ဆွေ	 အထွေထွေ S$ ၂၀၀
် စုစုပေါင်း ရဟန်း ၁၄ ပါးရှိပါသည်။၊ လှူဒါန်းရန် မကျန်တော့ပါ။။
ဦးလှအေး+ ဒေါ်ပုလုံး(ခ) ဒေါ်တင်အေး သား ကိုလင်းထွန်းအောင် ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
Nippon Express Company ဝန်ထမ်းများ၊ မမေမီဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ	 ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
ဦးဝင်းလွင်+ ဒေါ်ပြုံးမိသားစု* ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၄ ကိုဝေလင်း+ မအေးအေးချို သား မောင်မင်းဝေဖြိုး မိသားစု (Singapore)* ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၅ ဦးသန်းညွှန့်+ ဒေါ်သန်းညွှန် ့သမီးမပပဝင်း မိသားစု* ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၆ ကိုသက်နိုင်ဦး+ မဆုမွန်သိန်း ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၇ အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
မအေးချမ်းမြတ်၊ မဆုပန်ထက် မိသားစု ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၈	 အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
၉ အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
၁၀ အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
၁၁ အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
၁၂ အဖွားဒေါ်ခင်ရီ၊ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး
၁၃ ဦးကျော်ခင် + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး သမီး
မဝင်းမော်အေး မိသားစု ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
၁၄ ဦးဝင်းညွှန့်+ ဒေါ်စန်းစန်းရီ မိသားစု ဒုလ္လဘရဟန်း တပါးအတွက် S$ ၁၅၀
စုစုပေါင်း သီလရှင် ၄ ပါးရှိပါသည်။၊ လှူဒါန်းရန် အလှူရှင်ပြည့်သွားပါပြီ။
ကိုအောင်ကျော်မိုး+ မလင်းလင်း မိသားစု*
သီလရှင်တစ်ပါး အတွက် S$ ၁၀၀
၃ ဦးသန်းညွှန့်+ ဒေါ်သန်းညွှန် ့သမီးမပပဝင်း မိသားစု* သီလရှင်တစ်ပါး အတွက် S$ ၁၀၀
၄ ဦးသန်းညွှန့်+ ဒေါ်သန်းညွှန် ့သမီးမပပဝင်း မိသားစု* သီလရှင်တစ်ပါး အတွက် S$ ၁၀၀
ဆရာတော်များအတွက် ဓမ္မပူဇာ(နဝကမ္မ) အလှူရှင်များ
ဦးလှအေး+ ဒေါ်ပုလုံး(ခ) ဒေါ်တင်အေး သား ကိုလင်းထွန်းအောင်
ဦးအေးကျော်+ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး သက်ခိုင်ဇင် မိသားစု
ဦးဘကျော်+ ဒေါ်ကြည်ကြည်မာ အား အမှူးထား၍ ဒေါ်မူမူကျော်
Nippon Express Company ဝန်ထမ်းများ၊ မမေမီဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ
ကိုမျိုးမင်းသိန်း+ မခင်စုစုအောင် သမီး ခင်မိုးသိန်း ဓမ္မပူဇာ
ကွယ်လွန်သူ အဘိုး၊ အဘွားများနှင့် ဖခင်ကြီးတို့ အား ရည်စူး၍ ဦးအောင်မိုး၊ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သား မင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု	 ဓမ္မပူဇာ
ကိုအောင်သူဆွေ+ မအေးမြတ်မော်မိသားစု* ဓမ္မပူဇာ
ဦးတင်ထွန်း+ ဒေါ်သိင်္ဂီခင် မိသားစု*
ဒေါ်ခင်ရီ (အသက်-၈၅) ဓမ္မပူဇာ
၁၇ ဖခင်ကြီးဦးထွန်းရီ အားရည်စူးပြီး ဒေါ်မြင့်မြင့် နှင့် သမီး ခင်နန်းမြင့်မိသားစု
ဦးအုန်းသန်း+ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းရွှေ မိသားစု ဓမ္မပူဇာ
၁၉ ဦးကျော်ဝင်းတင့်+ ဒေါ်မြသီ မိသားစု
၂၀ နှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားများကို အမှုထား၍ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးဖြူစင်၊ နှင်းဆက်ဖြူစင်
၂၁ ကိုနေထွန်းကျော် + မမိုးမြင့်ခိုင် သမီး ရှင်မိုးနေ မိသားစု
၂၄	 ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်လွင်အား ရည်စုူး၍
ဒေါ် ကြည်ကြည်ဆွေနှင့် သားသမီးမြေးတစု ကောင်းမှု
ဆရာတော်(၄)ပါးအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်အလှူရှင်များ (S$၄၈၅)
ဦးရဲဝင်း+ ဒေါ်အေးမူ သား ကိုရဲနိုင်ဦး လေယာဉ်လက်မှတ် S$၄၈၅
ကိုနေမျိုးဆွေ+ မခင်ကောင်းဆက် လေယာဉ်လက်မှတ် S$၄၈၅ *
မမြင့်မြင့်လွင်+ မအေးအေးချို လေယာဉ်လက်မှတ် S$၄၈၅
၄ မဟေမာဝင်း	 လေယာဉ်လက်မှတ်	 S$၁၀၀
၅ မမြနန်းအေး လေယာဉ်လက်မှတ်	 S$၁၀၀
၆ (ဦးလှအောင်)+ ဒေါ်နုနုကြည် သမီး မဇာဇာဝင်း၊ မနှင်းနှင်းယု လေယာဉ်လက်မှတ် S$၂၈၅ *
တရားထိုင်ခန်းများနှင့် ယောဂီများနေထိုင်ရန်အဆောင်အတွက် အလှူရှင်များ
(၀၅-၀၇-၂၀၁၃ အတွက် လှူဒါန်းရန်းရန်ကျန်ရှိပါသေးသည်။)
( S$ ၆၀၀။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ တရက်စာပျမ်းမျှခြင်း၊ ရေ၊ မီး၊ Gas အပါအဝင်)
ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင် မိသားစု S$ ၆၀၀
၀၇-၀၇-၂၀၁၃ (ဒုတိယနေ့) ဒေါ်ခင်မြမြနှင့် သမီး မခင်သန္တာဆန်း @ Sandy S$ ၆၀၀
ဦးအေးကျော်+ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး သက်ခိုင်ဇင် မိသားစု S$ ၆၀၀
၀၉-၀၇-၂၀၁၃ (စတုတ္ထနေ့) နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍
သား Zheng Rong Hui S$ ၆၀၀
၁၀-၀၇-၂၀၁၃ (ပဉ္စမနေ့) ဦးမြင့်ထွဋ်သိန်း+ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး သမီး မစိုးစန္ဒာမြင့်၊ မစိုးနန္ဒာမြင့် S$ ၆၀၀
ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်မောင်အေး အားရည်စူး၍ ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင် သမီး မငြိမ်းဌေးစံ၊ သား ကိုမင်းကိုကိုအေး မိသားစု S$ ၆၀၀
ကိုမြင့်ကြိုင်+ မဖြူသဲထိုက် S$ ၆၀၀
မဇင်ဇင်ခိုင် S$ ၆၀၀
၁၀ ၁၄-၀၇-၂၀၁၃ (နောက်ဆုံးနေ့) Check-out (လှူဒါန်းရန်မလိုပါ)
ယောဂီများအား နီးစပ်ရာ MRT မှ သင်္ဘောထွက်မည့် Marina South
ကိုမြင့်ကြိုင်+ မဖြူသဲထိုက် ကားခအလှူ S$၁၀၀
မအိအိအောင် ကားခအလှူ S$ ၉၀
ဒေါ်ခင်မြမြနှင့် သမီး မခင်သန္တာဆန်း @ Sandy ကားခအလှူ S$ ၉၀
ိဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင် ကားခအလှူ S$ ၉၀
နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍
သား Zheng Rong Hui ကားခအလှူ S$ ၉၀
ကွယ်လွန်သူ အဘိုး၊ အဘွားများနှင့် ဖခင်ကြီးတို ့အား ရည်စူး၍ ဦးအောင်မိုး၊ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သား မင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု ကားခအလှူ S$ ၉၀
ကိုဇော်မျိုးလွင်+မရူပါထွန်း * ကားခအလှူ S$ ၉၀
ဦးတင်ထွန်း+ ဒေါ်သိင်္ဂီခင် မိသားစု ကားခအလှူ S$ ၉၀
ကိုမိုးဟိန်းနိုင်+ မအေးမာမာအောင် ကားခအလှူ S$ ၉၀
ဆရာတော်များ၊ ယောဂီများ၊ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ များ St. John's
ကိုအေးမင်း@Dahe Liu+ မနုယဉ်ထွေး သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၀၀
မလဲ့လဲ့ခိုင်	 သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
မမြသဲဖြူ	 သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ	 ှS$ ၁၀၀
ကိုကျော်ဇင်မင်း+ မခင်မျိုးမျိုးညွန့် မိသားစု သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၅၀၀*
ဦးလှအေး+ ဒေါ်ပုလုံး(ခ) ဒေါ်တင်အေး သား ကိုလင်းထွန်းအောင် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
ဒေါ်ခင်မြမြနှင့် သမီး မခင်သန္တာဆန်း @ Sandy သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
ဦးဘကျော်+ ဒေါ်ကြည်ကြည် အား အမှူးထား၍ ဒေါ်မူမူကျော် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
မဟေမာဝင်း သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
ကွယ်လွန်သူ အဘိုး၊ အဘွားများနှင့် ဖခင်ကြီးတို့ အား ရည်စူး၍ ဦးအောင်မိုး၊ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သား မင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု	 သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
မညိုစိမ့်အောင် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၀၀
မခင်စန္ဒာလှိုင်နှင့် မိသားစု* သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀
၁၂ မနန်းမိုးမိုးဖြူ (ထိုင်းနိုင်ငံ) သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၀၀
၁၃ ဦးဇော်နိုင်ဦး+ ဒေါ်မိမိခိုင် သား ဇော်လင်းထူး၊ သမီး ချမ်းမြေ့ဇော် မိသားစု သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၀၀၀
၁၄ မမြမြသွင်၊ မမြင့်မြတ်ဆွေ နှင့် မောင်နှမများ သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၉၀
ကိုနန္ဒအောင်+ မစိုးနန္ဒာမြင့် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၃၀၀
၁၆ မစန္ဒာသောင်း သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၅
၁၇ နှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားများကို အမှုထား၍ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးဖြူစင်၊ နှင်းဆက်ဖြူစင် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၃၀၀
၁၈ ကိုလှိုင်မင်းစိုး + မဝတ်ရည်နေဝင်း သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၉၀
၁၉ ကိုအောင်မော်+ မအေးအေးထူး မိသားစု သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၀၀
၂၀ ကိုနေအောင်လတ် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၁၅၀
၂၁ ကိုကျော်ဇေယျ+ မသက်နွယ်ဝင့် သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ S$ ၂၀၀
၂၂ မခင်သက်သက်ငြိမ်း နှင့် တူမ မနွယ်ရည်မွန်လင်း သင်္ဘောခခရီးစရိတ်အလှူ ှS$60
တရားစခန်းအတွက်ဆွမ်း၊ ဖျော်ရည်စသည်များ လှူဒါန်းကြသူများစာရင်း
(ပထမနေ့) Pioneer Meditation
+ မမြင့်မြင့်ကြည် မဆုထက်ရည် မိသားစု ** ကိုဝေဖြိုးသန်း ဦးအေးကျော်+
ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး သက်ခိုင်ဇင် မိသားစု
ကိုအာကာ၊ ကိုသြဘာ မိသားစု နှစ်ဘက်မိဘများ ဖြစ်ကြသော Dr.တင့်ဝေ+
ဒေါ်ဌေးကြည်တို့အား အမှူးထား ရည်စူး၍ ကိုဝဏ္ဏတင့်ဝေ+ မမေသဉ္ဇာဟန် ကောင်းမှု ဦးအုန်းသန်း+
ဒေါ်မြင့်မြင့်၊ သမီး မသီၤဂီမြင့် မိသားစု * ဦးမြင့်သောင်း+
(တတိယနေ့) ကိုနေမျိုးဆွေ+ မခင်ကောင်းဆက် * ကိုသူရိန်ထွန်း+
မစိမ်းယု မိသားစု ဦးစန်းမြင့်+
ဒေါ်အေးမြ သမီး မလှိုင်လှိုင်နွယ် မိသားစု ကိုအေးမင်း @Dahe Liu+ မနုယဉ်ထွေး
(စတုတ္ထနေ့) နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုအောင်ခင်သော်+ မယဉ်မင်းသူ ကိုရဲဝင်းဇော်+ မဟေမာန်ဝင်း (၂နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်) Pioneer Meditation
ဒေါ်ကြည်ကြည် အား အမှူးထား
(ပဉ္စမနေ့) ဦးခိုင်မိသားစု၊ ဦးတင့်လွင်မိသားစုနှင့် ကိုအောင်ကိုမြင့် မိသားစု * ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး
ဒေါ်တင်အေး သား ကိုလင်းထွန်း
(ဆဋ္ဌမနေ့) ဒေါ်ခင်မြမြနှင့် သမီး မခင်သန္တာဆန်း @ Sandy ဦးဇော်မြင့်+
မသဲစုမောင်* ဒေါ်ခင်မြမြနှင့် သမီး မခင်သန္တာဆန်း @ Sandy
(သတ္တမနေ့) ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး (က) ကွယ်လွန်သူ
(ခ) Nippon Express Company ဝန်ထမ်းများ၊ မမေမီဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ မဇင်မာဝင်းဆေွ ဦးစိုးဝင်း+
ဒေါ်ခင်ကြူအုန်း သမီးမအေးမြဖြိုး ချမ်းမြေ့စိုး
(ASH) (က) နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှုးထား၍ ကိုမင်းဇာနည်+
မဖြိုးစုစုမွှေး သမီး မိဆုမြတ်ဇာနည်၊ မမိရွှန်းလက်ဇာနည်
(ခ) နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှုးထား၍ စိုင်းသိန်းဇော်+
နန်းဆိုင်ဟွန် မိသားစု ဦးတင်ထွန်း+
ဦးတင်ထွန်း + မရီတာ
(လှူဒါန်းရန် မလိုပါ။) (လှူဒါန်းရန် မလိုပါ။)
( ၀၆-၀၇-၂၀၁၃ အာရုဏ်ဆွမ်းအတွက် s$ 200 ကျပါသည်။ ထို ့နေ့တွင် တရားပြဆရာတော်များ၊ ဒုလ္လဘ ရဟန်းများနှင့် သီလရှင်များ ကို ကပ်လှူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယောဂီများမရောက်ရှိသေးပါ။)
(ဂ) ဆရာတော် ဦးသိဒ္ဓိပုည
(ဃ) ဆရာတော် ဦးဉာဏဓဇ
စင်္ကာပူသို့ရောက်ရှိမည့်နေ့ ။ ။ ၀၃-၀၇-၂၀၁၃
Saint John's Island သို့ကြွရောက်မည့်နေ့။ ။ ၀၅-၀၇-၂၀၁၃
စင်္ကာပူဘက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည့်နေ့ ။ ။ ၁၄-၀၇-၂၀၁၃
မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်နေ့ ။ ။ ၁၆-၀၇-၂၀၁၃
စင်္ကာပူ၌ သီတင်းသုံးမည့်နေရာ ။ ။ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ (စင်္ကာပူ)
No 103, Verde View Road,
Choa Chukang Estate
Singapore 688708, Ph: 6367 3100
By Bus : Bus 307 from CCK MRT
Alight at 4th bus stop and walk further for 100 metres Walk in to Verde View and find 103. Map click here.
(စင်္ကာပူ/ မလေးရှား) ၂၀၁၁